Ee ma ọ bụ Ee e
Jụọ ajụjụ ma nweta azịza: Ee ma ọ bụ Ee e
Ugboro ole ka ị na-echere azịza ee ma ọ bụ ee? Ugboro ole ka ị na-ajụ ajụjụ? Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-ajụ ajụjụ ole na ole n'ụbọchị ma chọọ inweta azịza ya. Ọtụtụ mgbe, a na-amanye mmadụ ime nhọrọ. Ee ma ọ bụ Ee e, nke a bụ azịza kachasị nye ọtụtụ ajụjụ. Kedu ka ị ga-esi mata azịza nke a: ee ma ọ bụ ee, ga-abụ onye ziri ezi? Ọ bụrụ na i nwere obi abụọ na ị pụghị ime nhọrọ, mgbe ahụ ọ bụ oge iji gaa na saịtị anyị. Ma chọpụta azịza ịhọrọ: ee maọbụ ọbụla. Na saịtị da-no.ru?lang=ig ị nwere ike ịjụ ajụjụ ọ bụla nwere ike ịza ee, ee e. Kedu esi eji saịtị ahụ?
Naanị dee ajụjụ gị wee pịa bọtịnụ "Ịjụ". Mgbe sekọnd ole na ole, azịza ya ga-abụ ee ma ọ bụ ee. N'ezie, azịza ha enweghị usoro. Ma ị pụghị ịtụkwasị usoro a kpamkpam. Otú ọ dị! Ọrụ Azịza EE Ọ dịghị enyere aka imeri enweghị nkwenye ma mee mkpebi ziri ezi. Ọ bụrụ na ị natara azịza ya, ma achọrọ inweta azịza YES, nke a ga - enye gị obi ike. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịza azịza NO, ma ị nwetara YES, ajụjụ gị ga-amanye gị ọzọ iche echiche ma chekwaa otu ihe ngwọta ahụ maka gị.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọrụ YES / NO bụ ihe ijuanya ma nyere aka ime mkpebi. Ọ bụ ezie na a na-enye azịza ha n'ụzọ zuru oke. Ha na-ezighi ezi. Ma naanị na ị na-eme nhọrọ. Ebe "EE ma ọ bụ NO" saịtị ahụ na-enyere aka ịghọta ihe nhọrọ ịme: ee maọbụ ọhụụ.